Project Management Course Myanmar | Best PMP Course in Yangon - Navesse
You need total3months (12 weeks).
The best study plan is something you come up for yourself based on your work schedule, social life and commitment at home. What I did was I work backwards from the date of my exams. Weekdays I studied from 9-11pm. On weekends, I only studied on Saturday morning till noon (family commitment) and I don’t study on Sunday because grocery shopping and spending time with family. Most importantly, once you haveastudy plan, stick to it as much as you can. In your study plan, remember to add mock exams (i put mock exams asa“break” for me even though I have not finished studying some chapters).
Part 1 and part2of PMBOK® 6th Guide are the same except that…
– Part 1 is arranged by knowledge areas which include ITTOs, as well as the new4sections (key concepts, emerging trends, tailoring considerations and consideration for agile/adaptive environments) at the start of each knowledge area chapter.
– Part2is arranged by the5process groups. They only showed Inputs and Outputs. Much simplified as compared to Part 1.
In essence, part 1 is more detailed than part 2, and so if time doesn’t permit, then concentrate on Part 1 and glossary would be sufficient.
Flash Cards (49 Process)
Pre-tests Quizzes (1000) + min.3Mock exam with average score 75%
and You need best PMP® -Coach Mr. Sergio sergio@navesse.com 🙂
Learn more about Project Management Course Myanmar
၁၂ ပတျ နှငျ့ PMP ကို အောငျမွငျစှာလလေ့ာသငျယူခွငျး
PMP လလေ့ာသငျယူရနျ ၃လ (၁၂ ပတျ) လိုအပျပါသညျ။ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးမှာ မိမိဘာသာ အလုပျ ၊ အပေါငျးအသငျး နှငျ့
လလေ့ာသငျယူခြိနျမြားကို သခြောဆှဲရနျဖွဈသညျ။ စာမေးပှဲ အောငျရနျ ကြှနျတျောဘာတှေ ပွငျဆငျခဲ့သလဲ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ
လလေ့ာသငျယူပါတယျ။ အပတျစဉျ စနနေတေို့ငျး မနကျမှ နလေ့ညျ အထိသာ စာကွညျ့ဖွဈပါတယျ။ တနင်ျဂနှေ ဆိုရငျတော့ မိသားစုနှငျ့
ဈေးဝယျထှကျဖွဈသညျ့အပွငျ မိသားစုကို အခြိနျပေးသောကွောငျ့ စာမကွညျ့ဖွဈပါ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ ကိုယျက စာကွညျ့ရနျ
အစီအစဉျခထြားပွီးပွီဆိုလြှငျ ဖွဈနိုငျသမြှ လုပျဖွဈအောငျလုပျလိုအပျပါတယျ။ သငျ့စာကွညျ့ဇယားမှာ အစမျးစာမေးပှဲတှထေညျ့ပါ။
PMBOK® 6th Guide, အပိုငျး ၁ နှငျ့ အပိုငျး ၂ က တူညီကွပါတယျ။ သို့ပမေယျ့
အပိုငျး ၁ ကို ITTO ပါဝငျသော Knowledge Area မြားဖွငျ့ စီစဉျထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ key concepts, emerging trends, tailoring
considerations and consideration for agile/adaptive environments ဆိုတဲ့ ကဏ်ဍ ၄ မြိုး ပါဝငျပါတယျ။
အပိုငျး ၂ ကို Process Groups ၅ မြိုး ဖွငျ့ စီစဉျထားပါတယျ။ အဲဒီမှာတော့ Input နှငျ့ Output တို့သာ ဖျောပွထားပါတယျ။ အပိုငျး၁ နှငျ့ ယှဉျလြှငျ
အပိုငျး ၁ သညျ အပိုငျး ၂ ထကျပိုမို အသေးစိတျရှငျးလငျးထားပါတယျ။ အခြိနျသိပျမရလြှငျ အပိုငျး ၁ ကို ပိုအာရုံစိုကျပွီး အချေါအဝျေါ
အရေးကွီး ၃ မြိုးကတော့
၁။ Process 49 ခုပါတဲ့ Flash Cards
၂။ ITTO ဂိမျး
၃။ အစမျးစာမေးပှဲ ၃ ခု ပြှမျးမြှ အမှတျ ၇၅% နှငျ့ Quiz ၁၀၀၀
ဒါ့အပွငျ အကောငျးဆုံး ဆရာ PMP® -Coach Mr. Sergio ရဲ့အနီးကပျလကေ့ငျြ့သငျကွားမှုပဲဖွဈပါတယျ။
၁၂ ပတ် နှင့် PMP ကို အောင်မြင်စွာလေ့လာသင်ယူခြင်း
PMP လေ့လာသင်ယူရန် ၃လ (၁၂ ပတ်) လိုအပ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ မိမိဘာသာ အလုပ် ၊ အပေါင်းအသင်း နှင့်
လေ့လာသင်ယူချိန်များကို သေချာဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲ အောင်ရန် ကျွန်တော်ဘာတွေ ပြင်ဆင်ခဲ့သလဲ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ
လေ့လာသင်ယူပါတယ်။ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း မနက်မှ နေ့လည် အထိသာ စာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ ဆိုရင်တော့ မိသားစုနှင့်
ဈေးဝယ်ထွက်ဖြစ်သည့်အပြင် မိသားစုကို အချိန်ပေးသောကြောင့် စာမကြည့်ဖြစ်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်က စာကြည့်ရန်
အစီအစဉ်ချထားပြီးပြီဆိုလျှင် ဖြစ်နိုင်သမျှ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်စာကြည့်ဇယားမှာ အစမ်းစာမေးပွဲတွေထည့်ပါ။
PMBOK® 6th Guide, အပိုင်း ၁ နှင့် အပိုင်း ၂ က တူညီကြပါတယ်။ သို့ ပေမယ့်
အပိုင်း ၁ ကို ITTO ပါဝင်သော Knowledge Area များဖြင့် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် key concepts, emerging trends, tailoring
considerations and consideration for agile/adaptive environments ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍ ၄ မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
အပိုင်း ၂ ကို Process Groups ၅ မျိုး ဖြင့် စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ Input နှင့် Output တို့ သာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပိုင်း၁ နှင့် ယှဉ်လျှင်
အပိုင်း ၁ သည် အပိုင်း ၂ ထက်ပိုမို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ အချိန်သိပ်မရလျှင် အပိုင်း ၁ ကို ပိုအာရုံစိုက်ပြီး အခေါ်အဝေါ်
အရေးကြီး ၃ မျိုးကတော့
၂။ ITTO ဂိမ်း
၃။ အစမ်းစာမေးပွဲ ၃ ခု ပျှမ်းမျှ အမှတ် ၇၅% နှင့် Quiz ၁၀၀၀
ဒါ့အပြင် အကောင်းဆုံး ဆရာ PMP® -Coach Mr. Sergio ရဲ့ အနီးကပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Project Management Course Myanmar ကို လလေ့ာရအောငျ
PMI PMP® Talks Video
Get Appointment and free coaching/training service. You may join our free training . Meet with global experts Now... Your Personal Global Coach will recommend you withalot of professional advises.
PMP PMI Certificate
Meet with Experts & Coach * Coming Monday between 15:00-19:00Coming Tuesday between 15:00-19:00Coming Wednesday between 15:00-19:00Coming Thursday between 15:00-19:00Coming Friday between 15:00-19:00Coming Saturday between 17:00-19:00Coming Sunday between 17:00-19:00
Optional - Please specify your available meeting date and time